UK, Australia na Canada dọrọ ndị amaala aka na ntị gbasara mwakpo ụjọ na Myanmar
Home » Iyi ọha egwu na mpụ maka ndị njem: » UK, Australia na Canada dọrọ ndị amaala aka na ntị gbasara mwakpo ụjọ na Myanmar
Great Britain, Australia na Canada sonyeere United States na inye ụmụ amaala ha ndụmọdụ banyere mwakpo ime ihe ike na Myanmar.
Warningdọ aka na ntị mbụ na Wednesday site na US Embassy na Yangon kwuru na ndị nchekwa Myanmar “na-enyocha akụkọ banyere mwakpo nwere ike ịda” na isi obodo mba ahụ, Naypyitaw. O kwuru na mwakpo enwere ike ịgbatị ruo ọnwa ndị na-abịanụ na Naypyitaw, Yangon na Mandalay, obodo ya atọ kachasị.
Agbanyeghị, enweghị nkọwa maka ihe kpatara enwere ike ịwakpo ụbọchị ụfọdụ na Septemba na Ọktọba. Enweghị akụkọ na agha ọ bụla mere na Tọzdee.
Ndị ndụmọdụ Canada na Britain kwuru kpọmkwem na mwakpo ndị ahụ nwere ike ịbụ ogbunigwe. “Gọọmenti Mianmaa akwadoghị ozi a. Enweghị usoro ọ bụla akwadoro n'oge a, "nkwupụta nke ”lọ Ọrụ Ofesi na Commonwealth nke Britain kwuru.
Ọtụtụ agbụrụ dị iche iche na-ebuso gọọmentị Mianmaa agha maka nnwere onwe ha, mana ọgụ a na-emekarị na mpaghara ha na mpaghara mpaghara.
Mmiri udu mmiri 'nke a na-enwetụbeghị ụdị ya' gburu ihe dị ka 59 na mgbago ugwu India
Pakistani PM ụgbọ elu na-eme mberede ọdịda na ọdụ ụgbọ elu JFK nke New York